Nagu saabsan - Huaian Huafu Nylon Co., Ltd.
Nylon Tower wiishka wiishka
Nylon goos gooska
nylon suunka pulley
qaybo naylon ah oo qaas ah
Huaian Huafu Casting Special Nylon Co., ltd, oo la aasaasay 2007, oo ku taal magaalada huai'an, oo ah magaaladii ugu horreysay ee Shiinaha, zhou en lai wuxuu ku takhasusay soo saarista alaabooyin naylon oo kala duwan oo ay ka mid yihiin gawaarida, Gawaarida, Qalabka, Qalabka, gacmo-gacmeedka , wiishka wiishka, Tilmaamaha xargaha iyo dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha naylonka qaabeeya iyo qalabka.
Huafu inta badan waxay soo saartaa waxyaabo naylo noocyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin naylon pulleys guide tilmaamaha xarigga nayloon, qalabka naylon, gaskadda nylon, baarka nylon, slider naylon, rullaluiste nylon iyo qaybo kala duwan oo naylon ah oo qaabab gaar ah leh. In ka badan toban sano 'horumar', Huafu waxay u soo saartay mid ka mid ah kuwa ugu sareeya ee waxsoosaarka nylon wax ka badan boqol shaqaale oo ay ku jiraan siddeed iyo toban injineero iyo qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah ee toban milyan oo doolar.
◉: Inta badan qiimaha tartanka
◉Gaarsiinta amar dhaqso badan
◉: Nidaamka raadraaca tayada qaangaarka ah
◉: Alaabta nylon kartoo
◉: 24 saac heegan adeegga
◉: xirfadle kooxda farsamada
Baahida loo qabo badeecadaha Nylon-ka ayaa si aad ah kor ugu kacaya Sida horumarka dhaqaalaha adduunka tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Waxyaabaha Nylon, Maaddaama ay yihiin wax aan lagu beddeli karin naadiga alaabada caagga ah, ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay aagga injineernimada qiimihiisa gaarka ah.
Nylon pulleys ayaa loo adeegsaday wiishka sanqadhiisa hooseeya, is-saliidaynta, ilaalinta siligga iyo kordhinta nolosha adeegga ee qalabka oo dhan.
Sidoo kale waxyaabaha nylon waxaa lagu mariyaa wiish sida jilayga, hagaha xargaha si loo yareeyo jahawareerka loona yareeyo culeyska mashiinada oo dhan, iyo mashiinada nylon lagu dabaqo ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dekedda halkaasoo jawiga shaqada ee qoyaanka badanaa uu ka dhaco
Wiishka Tower wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dhismaha magaalooyinka, hantida ma guurtada ahna waxay dabooshaa in ka badan 10% dhaqaalaha adduunka. Waxyaabaha loo yaqaan 'nylon pulleys' waa qaybo aan la beddeli karin oo ku jira geeddi-socodka wax soo saarka wiish munaarad waxayna qaadi karaan ku dhowaad awood isku mid ah marka loo barbar dhigo qalabka biraha.
Marka la barbardhigo goomaha birta, goomaha nayloonku wuxuu leeyahay dabool aad u fiican, iska caabbinta daxalka, kuleylka kuleylka, guryaha aan magnet-ka ahayn, culeyska fudud. Marka Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa semiconductor, gaari, warshadaha aerospace, qurxinta gudaha iyo meelaha kale ee la xiriira.
Iskusoo wada duuboo, sida wakhtigu socdo, badeecooyin naylo ah oo soo badanaya ayaa lasoo saari doonaa laguna dabaqi doonaa meelo badan. Mudnaanteeda wanaagsan, qaybaha nylon ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelaa qaybaha biraha. Taasina waa isbeddellada sidoo kalena waxtar ayey u leedahay horumarinta deegaanka. Rajaynaynaa in macaamiisheennu nala soo xiriiri karaan, Huafu Nylon`la kulmaan baahidaada alaabta naylon. Si wada jir ah ayaan u ballaarineynaa ganacsigeenna, abuurnaa xiriir iskaashi oo xasilloon.
Maya 37, Wadada Shanyang, Magaalada Huaian, Shiinaha